Netizen Report: Mitombo Ny Sivana Ao Venezoela’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Avrily 2017 14:21 GMT
Nanao fihetsiketsehana saika isan'andro ireo mpanao fihetsiketsehana ao Venezoela ary tena marobe hatramin'ny nanafoanan'ny Fitsarana Tampony vonjimaika ny Antenimieram-pirenena tamin'ny 30 Martsa, fihetsika izany sokajian'ny maro toy ny “fanonganan-mpanjakana manasazy tena“. Niteraka tabataba iraisampirenena ny fanovana.
Na dia nanafoana ny fanapahan-keviny aza ny fitsarana andro vitsy taty aoriana ary nametraka indray ny Antenimieram-pirenena, nitohy ny fitroaram-bahoaka, manery ireo manampahefam-panjakana mba hiatrika ny krizy ara-toekarena sy ara-politika efa nanomboka tamin'ny taona 2014 ka hatramin'izao izany. Ankoatra ny korontana ara-politika sy ny fiakaran'ny tahan'ny heloka feno herisetra, nahatonga an'i Venezoela ho ao anatin'ny fidangan'ny vidim-piainana mampiaiky nandritra ny telo taona mahery ny fidinan'ny vidin-tsolika manerantany, vokatra fanondran'ny firenena. Tsy nety nilatsaka ambanin'ny 50% ny fidangan'ny vidim-piainana hatramin'ny taona 2014. Nihoatra ny 100% izany tamin'ny taona 2015, ary tonga 800% tamin'ny faran'ny taona 2016. Nanome tsiny hatrany an'i Etazonia noho ny fidinan'ny tsenan'ny solika ny filoha Nicolas Maduro .
Nanjary zava-dehibe hatrany ho an'ny Venezoeliana ny fampahalalam-baovao an'olo-tsotra nandritra izany fotoana izany, satria mikasa hihazona fanarahamaso henjana ireo fampahalalam-baovao ofisialy sy fampahalalam-baovaon'ny orinasa ny fitondran'i Maduro. Noesorina tamin'ny fantsona fahitalavitra mandeha amin'ny hosina ny CNN, lohalaharana amin'ny fanaovana tatitra mitsikera ao amin'ny firenena, tamin'ny Febroary 2017.
Nahatonga ireo fampahalalam-baovao an'olon-tsotra ho anisan'ireo loharanom-baovao miompana amin'ny fihetsiketsehana sy ny famoretana mety hihatra amin'ny mpamaky izany. Ny vokatr'izany angamba, dia mpanao gazety tsy miankina marobe no niharan'ny herisetra sy fandrahonana ara-batana nandritra ny asan'izy ireo tao anatin'ny herinandro vitsy. Elvis Flores, mpakasary ao amin'ny fantsona antserasera no voasambotra nandritra ny fandefasana fandaharana raha naka ny sarin'ireo mpanao fihetsiketsehana tao Caracas. Notazonina vonjimaika nandritra ny sivy ora izy no sady voadaroka. Nosakanana nanomboka tamin'ny 7 Aprily ny VPITV sy ny fahitalavitra antserasera malaza hafa, anisan'izany ny fahitalavitra Vivoplay sy El Capitolio araka ny filazan'ireo mpiserasera Venezoeliana. Ho setrin'ny sivana, nitambatra tamin'ny alalan'ny tenirohy #VzlaTrancaContraElGolpe (“Manakana fanonganam-panjakana i Venezoela”) ireo mpanao fihetsiketsehana.
Governemanta maro ao Azia Atsimo Atsinanana no nanamaivana ny olana momba ny vaovao faikany tamin'ny fanamarinana ny lalàna henjana kokoa sy hanorisorenana mpanao gazety. Tao Singapaoro, Nilaza i Yaacob Ibrahim, Minisitry ny Fifandraisana sy ny Vaovao fa hanova ny Lalànan'ny Haino Aman-jeriny ny firenena atsy ho atsy mba hiantohana fa ao anatin'ny soatoavin'ny fiarahamonintsika ireo mpamatsy votoaty any ivelany, anisan'izany ny tokony hihazonana ny firindràna ara-pivavahana sy ara-poko.
Nanambara drafitra hanakanana ny Zello, fampiharana finday tsindrio-iresahana ny mpandrindra ny media ao Rosia, satria nampiasain'ireo Rosiana mpamily kamiao mpandeha lavitra nikarakaràna fihetsiketsehana tao anatin'ny volana vitsivitsy ny Zello. Nilaza ampahibemaso ny Roskomnadzor, manampahefana tompon'andraikitra amin'ny fanarahamaso ny media Rosiana fa tsy nahavita nanome ny vaovaon'ny orinasa ilaina ampidirina ao amin'ny Rejisitra federalin'ny Mpikarakara Fanapariahana Vaovao ”, lisitr'ireo sehatra antserasera arahan'ny Roskomnadzor maso ny Zello.
Satria efa akaiky ny fifidianana filoham-pirenena ao Iran, mitombo miharihary ny fifandirana eo amin'ny filoha ankehitriny somary tony fihetsika Hassan Rouhani (izay heverina fa hirotsaka hofidiana indray) sy ireo mpitrifana ara-politika. Tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nokarakarain'ny governemanta Iraniana voalohany indrindra mba halefa mivantana ao amin'ny Instagram Live, nirehareha tamin'ireo zava-bita maro nataon'ny fitondrany i Rouhani, anisan'izany ny ezaka hanatsarana ny hafainganam-pandehan'ny aterineto ao Iran, izay nahitana fitomboany avo folo heny tokoa. Nilaza ihany koa izy fa raha tsy niezaka tamin'izany ny fitondrany, “mety ho natao sorona avokoa ny sehatra media sosialy rehetra.” Na dia mbola voasakana ao Iran aza ny Facebook, tsy voasivana kosa ny Instagram sy ireo sehatra vahiny malaza tahaka ny WhatsApp sy Telegram nandritra ny fitantanan'i Rouhani.
Na izany aza, nizaka mafy ny fandraisana anjaran'izy ireo tao amin'ny sehatra voalaza ny olona sasany: Tamin'ny 14 Martsa, mpitantana fantsom-baovao ao amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra Telegram am-polony no ​​nosamborin'ny Mpiambina Revolisionera hiringiriny, izay nilaza fa fandrahonana ho an'ny fiarovam-pirenena ny fantsona tantanin'ireo reformista sy tony fihetsika ara-politika. Ho fahasorenan'ny fitsarana, nantsoin'ny filoha Hassan Rouhani ny hanaovana fanadihadiana momba ny fisamborana, ka mampiseho ny hantsana ara-politika eo amin'ny antoko roa tonta.
Ambadiky ny Rindrin'Afo Lehibe: Ahoana no naha lasa Fahefam-baovao Manerantany (Global Information Power an'i Shina – Shanthi Kalathil, Center for International Media Assistance
Tsy (afaka) Mi-Chat izahay: “Famoretana 709” Adihevitra Nosakanana ao amin'y Weibo sy WeChat – Citizen Lab
Afef Abrougui, Mahsa Alimardani, Ellery Roberts Biddle, Oiwan Lam, Weiping Li, Leila Nachawati sy Sarah Myers West no niara nanoratra ity tatitra ity.